appharu « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं २४ पुस । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दवावमा परेका छन्। पुस ११ को एकपक्षीय निर्णय सच्याउन सामूहिक दबाब दिने निष्कर्षसहित जिल्ला सभापति भेला सकिएको
पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिक आज देश निकाल गरिदै, लिन चीनका दुईवटा विमान काठमाडौं उत्रिर्दै
काठमाडौं २३ पुस । ठगी धन्दा चलाएको आशंकामा दुई साताअघि पक्राउ परेका एक सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई आज बुधवार फिर्ता पठाउने तयारी छ । उनीहरुलाई लिन चिनियाँ जहाज आउँदैछ
विधेयकको लाइन बिछयाएर बाटो फेर्दै सरकार
काठमाडौं २२ पुस । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नियन्त्रणमुखि विधयकहरु संसदमा पेश गर्न थालेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा गोपनीयताको हक हनन
नेकपाले छान्यो राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार, नारायणकाजी र वेदुराम भूषाल पनि उम्मेदवार
काठमाडौं १८ पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु टुंगो लगाएको छ । शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेता वेदुराम भूषाललाई पनि उम्मेदवार
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस-समाजवादी तालमेल
काठमाडौं १८ पुस । सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नजिकिएको छ । राष्ट्रियसभाको चुनावमा कांग्रेस र समाजवादीबीच गठबन्धन हुने भएको छ । माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा
किन लुकाए मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ?
काठमाडौं १८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति लुकाएको छ । मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको नयाँ बाटो तय गर्न भन्दै सरकारले कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको थियो
नयाँ सभामुखमा सुवास नेम्वाङका विषयमा सहमति !
काठमाडौं ११ पुस । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ दोहारिने भएका छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको छ । तुम्वाहाम्फेलाई मन्त्री
कामदारको पसिनामा कर्मचारीदेखि राजदुतसम्मको रजाइँ
काठमाडौं ६ पुस । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको उद्धार गर्न उठाएको रकममा पदाधिकारीको मस्ती गरेको पाइएको छ । श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजदुतसम्मले श्रमिकको पसिनामा रजाइँ गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौं ६ पुस । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तानिएका छन् । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गोप्य रुपमा बयान लिएको छ । नेपालसँग सीआईबीले सोधपुछ गरेको छ । नेपालसँग लिखित
काठमाडौं ४ पुस । उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीना दिने तयारी गरेकी छन् । राजीनामा आजै दिने या आइतबार भन्नेमा आन्तरिक छलपल भइरहेको छ । एक नेताका अनुसार आइतबार
प्रधानमन्त्रीको प्रयास विफल गराउने पक्षमा मन्त्री र पार्टीका नेताहरु
काठमाडौं । सरकारकार मन्त्रीहरु नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास विफल बनाउने अभियानमा लागेका छन्। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍को हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको भनिएको अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौताको
काठमाडौं ३० मंसिर । कांग्रेसका नेताहरु गुटगत बैठकमा व्यस्त भएका छन्। सभापति शेरबहाजदुर देउवा पेलेर जाने र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गलाउने रणनीतिमा लागेपछि गुटगत कैठक बाक्लिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको